Expert Semalt: 10 Ezigbo Nchebe Cyber ​​Nche
Ngalaba na-elekọta cyber nche na-aga n'ihu n'ihu na ndị ọkachamara na-esonyere ụlọ ọrụ ahụ.N'ihi nke a, a na-emepụta software dị njọ karị na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 230 000,000 malware na-arụ ọrụ kwa ụbọchị.A na-eme atụmatụ na a na-etinye ego 100 ijeri kwa afọ iji mee ihe banyere cyber-crime.
Ọ bụrụhaala na ị na-eji Intanet eme ihe, ị ga-enwe ike ịnweta cyber-attacks - lamberts vitamin d3. Ndị aechiche nke Nik Chaykovskiy, nke Ọkachamara Onye Nlekọta Ihe Nlekọta Ndị Nlekọta Ọrụ, gosi na ọ dị ize ndụ na ihe nchọgharị ahụ iji rụọ ọrụ n'enweghị nchebe dị mma.
1. Ndị na-akpata cyber kasị njọ n'ụwa nile
FBI nwere ndepụta nke ndị kasị achọ 19 omempụ na internet ndị na-ebu makandị ọrụ weebụ na-efu na ihe ruru $ 350,000 na $ 100 nde. N'oge a, JABBERZUS bụ ndị chọrọ FBI.
2. Kọmputa virus kpụ ọkụ n'ọnụ kacha njọ na akụkọ ihe mere eme
MyDoom a na-ahụ dị ka ihe kachasị ọnụ ahịa n'ụwa nile na akụkọ ihe mere eme nke cybernche. Ọ dị mma na nje ahụ emeela ka ọ bụrụ ijeri $ 38.5.
3. Ihe kacha mma nke ndị mgbasa ozi mgbasa ozi
Ruo ugbu a, e nwere ihe karịrị pasent 1.6 ndị ọrụ mgbasaozi mgbasa ozi na-eme yaa hacker si kacha lekwasịrị anya. Ndị ọrụ na-etinye oge dị ukwuu na netwọk mmekọrịta nwere ike ịdaba na mwakpo ndị a.
4. 99% nke kọmputa nwere ihe ize ndụ nke iji kuki
Karịa 99% nke kọmputa nwere mmemme dị ka Adobe Reader, Oracle Java, na AdobeEjiri Flash na sistemụ arụmọrụ ha. Ọnụnọ nke ngwanrọ ndị a bụ otu ụzọ, ndị na-awakpo ahụ nwere ike ịnweta na ịnwetangwaọrụ gị..
5. Ndị omempụ Intanet chọrọ ịgakwuru ndị a tara ahụhụ
Ndị a na-eji agha cyber-agha eme ihe n'ụzọ dị mfe ebe ọ bụ na ndị mmadụ na-etolite njikọ kacha ikebanyere nchekwa cyber. Dika odi otua, injinia ndi mmadu na-ezo aka n 'uzo nke ijide n'aka na ndi mmadu na-ekwuputa nzuzo site n'igbu haha na uche.
6. Nchekwa nchebe: n'ime ọrụ
N'ọtụtụ ọnọdụ, ihe dịka pasent 59 nke ndị ọrụ na-ezu ohi data gbasara usoro haa chụpụrụ maọbụ mgbe ha na-apụ. Ndị ọzọ na-arụ ọrụ n'enyemaka iji nweta nchebe na-agụnye ndị na-etinye ọnyà, ndị na-enweghị nkwụnye obi na-ejide ma na-eji ndị na-etinye aka.
7. Gọọmenti gị na-amụbawanye ọnọdụ gị
Ọ bụ eziokwu na gọọmenti n'ụwa nile na-emepụta malware na ebumnucheeji ya dị ka ngwá agha dijitalụ. Ndi ozo a na-aru ndi mmadu onwe ha na ndi mmadu na-aru yanke ndị omekome omekome.
8. E nwere map ozugbo nke na-egosi ndị agha ahụ na-eme ihe
United States bụ atụmatụ kachasị maka ndị omempụ cyber. Dịka ọmụmaatụ,Òtù Uche Na-ahụ Maka Nchebe nke U.S. tara ahụhụ karịa $ 100 nde n'ihi mmebi nke onye omekome China.
9. Cybercrime bụ nnukwu ihe ịma aka maka ụwa
68% nke ego furu efu n'ihi nbudata ịntanetị weere na a pụghị ịchọpụta ya.Cyber-mpụ abụghị nanị na-efu ụgwọ ma na-ebute nsogbu ndị ọzọ maka ụlọ ọrụ n'ụwa nile.
10. Mgbagwoju anya bụ isi ihe na-akpali akpali nke catalytics cyber ọgụ
Mgbagwoju anya bu ihe kariri pasent 50 nke uzo agha cyber nile n'uwa dum. Okwu ahụ bụihe nnọchiteanya nke dissident applications of computers with intent of enhancing a political policy.
Cheta mgbe nile, na ị gaghị elelị ndị omempụ Intanet. Ya mere ọ dịghị nchebedị irè, ọ dịghị iyi egwu dị oke ntakịrị. N'agbanyeghị oke nke iyi egwu cyber, a ghaghị itinye usoro kwesịrị ekwesị n'ọnọdụiji gbochie ọ bụla agha ị nwere ike ihu.